Guangdong Jinli Electrical Appliance ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 1985. ၎င်းသည် low-voltage switches များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည် & ခြေစွပ်. ထုတ်ကုန်များတွင် BS / Europe / Italy Standard ပါဝင်သည်, နှင့်အတူ 20 စီးရီး, အရာထက်ပိုပြီးရောင်းချပါပြီ 60 နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ. ဒါဟာ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း 96% ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏.
ကျနော်တို့ထက်ပိုရှိသည် 20 နှစ်ပေါင်း OEM & ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် R မှသင်၏တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ODM ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ&ထုတ်လုပ်မှုမှ: D.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ၃၀၀၀၀၀ ㎡ဖုံးလွှမ်းထားသည်, ကျော်သွားပြီ 1300 ဝန်ထမ်းများ, 108 ဆေးထိုး mavhines, 20 မြန်နှုန်းမြင့် puching စက်တွေ,9အော်တိုစည်းဝေးပွဲကိုလိုင်း, 100 လက်စွဲစာအုပ်စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်း, 10 montly စွမ်းရည်သန်းအပိုင်းပိုင်း
R&D အဖွဲ့ ၀ င်
1. လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှု: တစ် ဦး ကခိုင်မာတဲ့ R ကို&သင်၏စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောခလုတ်များနှင့် sockets များကိုထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်သော D အသင်း 30-45 ရက်ပေါင်း,24 မင်းအတွက်နာရီနာရီ.
2. အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ: ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့နှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၏ရှုထောင့်တိုင်းအတွက်တိကျသောစံနှုန်းများကိုချမှတ်ခဲ့သည်,က ISO ၏လက်မှတ် 9001, ISO14000, ဒီနည်းကို, သမဝါယမ, ဆာဆ, ROHS, CNAS ဓာတ်ခွဲခန်း.
3. အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်: 35 နှစ်ပေါင်း OEM & ODM အတွေ့အကြုံ, OEM အနိမ့်ဗို့အား switches များပေး & Fortune မဂ္ဂဇင်းအတွက်ခြေစွပ် 500 ဆယ်နှစ်ကျော်ကုမ္ပဏီ
အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်ပါ ငါတို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင်းခလုတ်များထုတ်လုပ်သည့်ကျွမ်းကျင်သောပို့ကုန်စက်ရုံဖြစ်သည် & ခြေစွပ်, အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းပေး.
35 OEM & ODM အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း
ISO 9001, ISO14000, ဒီနည်းကို, သမဝါယမ, ဆာဆ, ROHS, CNAS ဓာတ်ခွဲခန်း
30-45 ရက်ပေါင်းအမိန့်ဖြည့်စွက်, 24 နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု
တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောမြို့ရိုး switch ကိုအပေါက်
ထုတ်ကုန်စီးရီးပြီးပြည့်စုံသည်, အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များများအတွက်သင့်လျော်သော, ထိုကဲ့သို့သောမိသားစုအဖြစ်, စီးပွားရေး, ဟိုတယ်, ပြခန်း, စသည်တို့.
ထက်ပိုပြီး 100 သုံးစွဲသူများကိုအရည်အသွေးမြင့်သောခလုတ်များတပ်ဆင်ရန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ & ခြေစွပ်.
ထို့ကြောင့်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမဟုတ်သောခလုတ်များအတွက် ၁၀ နှစ်အာမခံပါသည် & sockets နှင့်အီလက်ထရောနစ် switch ကိုများအတွက်2နှစ်အာမခံ & ခြေစွပ်.
အရည်အသွေးမြင့်မားသော PC ပစ္စည်းကိုသုံးပါ
modular ခလုတ်အပြည့်အဝအကွာအဝေး & ခြေစွပ်
4 ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ: ပလပ်စတစ်, သတ္တု, ဖန်ခွက်, သစ်သား
2 ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများ: အလျားလိုက်, ဒေါင်လိုက် ဦး တည်ချက်
ရေစိုခံခလုတ် & ခြေစွပ်သင့်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုသေချာ: IP65, IP44
နောက်ကျော - အိမ်ရာပစ္စည်းသည် 850 50 အပူချိန်စမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Multi Duplex US power Socket ထွက်ပေါက် ( ဝက် terminal)
Scuk Terminal ပါသော USB port 3.1A 16A နှင့်အတူ Schuko ပါဝါအပေါက်
တစ်ခုမှာ Gang 200W Dimmer အမှတ်တံဆိပ် Hanger နှင့်အတူ
16AX 250V3ဂိုဏ်း 1 Way Light Switch - အဖြူရောင်
13Neon နှင့်အတူ 250V နှစ်လုံးဝင်ရိုးစွန်း BS Socket Outletit ကိုပြောင်းလိုက်သည်-2ဂန်ဖြူ
Neon & USB ဖြင့် Gang Switch 13A BS Electric Socket
1 Neon & USB ပါသော Gang Switch 13A BS Electric Socket သည်အိမ်များကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းအလှဆင်မှုများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်, ဟိုတယ်များ, ရုံးများ, စသည်တို့. ၎င်းသည်လူတို့၏ဘ ၀ အတွက်အဆင်ပြေစေပြီးအားသွင်းခြင်းပြproblemနာကိုအချိန်မရွေး၊.
ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူထိန်းကိရိယာ S81 / TW Switch
ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည်အဆင့်မြင့် microcomputer ချစ်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်အားအတွင်းနှင့်အပြင်အာရုံခံကိရိယာမှတိကျမှန်ကန်စွာသိရှိနိုင်သည်, နှင့်အသုံးပြုသူကသတ်မှတ်ထားသည့်အပူချိန်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်နှိုင်းယှဉ်, အသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူပေးစက်ကိုဖွင့် / ပိတ်ရန်.
IP65 ရေစိုခံ။ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်မှုသည်ကုန်ပစ္စည်းအားပြင်ပတွင်ပိုမိုသင့်လျော်စေသည်, ရေချိုးခန်း, မီးဖိုချောင်နှင့်ရေငွေ့သည်ခလုတ်များနှင့်ခြေစွပ်များအလွယ်တကူဝင်နိုင်သည့်နေရာများဖြစ်သည်. Single Way ရေစိုခံမီးခလုတ်တစ်ခုနှင့် Gang French Socket Outlet ကို PC-UV ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, သောအလွယ်တကူညှိုးနွမ်းမည်မဟုတ်.
2 Hanger S82 / 16U /2ဖြင့် Shutter ဖြင့် Gang Schuko Wall Socket
2 Hanger နှင့် Shutter ပါသည့် Gang Schuko Wall Socket သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ 10 နှစ်အာမခံချက်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်လုံခြုံ. သင်နှင့်သင့်မိသားစု၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည်အကာအကွယ်ပေးသည့်တံခါးအပြင်အဆင်ကိုထည့်သွင်းထားသည်, အရာထိထိရောက်ရောက်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မတော်တဆမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်.
ISO9001 ၏လုပ်ငန်းလက်မှတ်, ISO14001, OHSAS18000，CNAS.
CE ၏ကုန်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း, သမဝါယမ, RoHs, TUV, VDE, ဆာဆ, GCC
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် D / P ဖြစ်သည်, T / T, မျက်မှောက်မှာ L / C 30 ရက်ပေါင်း ၆၀ ရက်, ငွေသား, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ. 30% သိုက်နှင့် 70% အဖြစ်ချိန်ခွင်လျှာတင်ပို့ခြင်းမပြုမီပေးဆောင်ရပါမည်.
2. ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာဖြစ်ပါတယ် 30-40 ရက်ပေါင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့်အတွက်သဘောင်္တင်ရန်စီစဉ်နိုင်သည်.
3. သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားနှင့်၎င်းတို့၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်လိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့နမူနာပေးပို့နိုင်ပါတယ်.
4. ထက်ပိုပြီး 20 ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ 24 နာရီ, သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.